Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ngaba ubusazi ukuba kukho iAussie Outpost eMunich?
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ferris Wheel kunye neAdina Munich Hotel-Ifoto © Elisabeth Lang
Ngelixa kwimpuma yeLondon, iShoreditch kunye nokuba kuseto lokubulala kakubi kukaJack the Ripper, lijike laba likomkhulu laseLondon elipholileyo.
Namhlanje, le yindawo yasezidolophini, eneendawo zokutyela ezifashisayo kunye neetoni zobugcisa ezitalatweni, iibhari, ii-pubs, kunye neekhefi ezisesitratweni.
Kwaye ngoku kukho i-East Side entsha yaseMunich yokufumanisa kunye nokuhamba kude neholo yedolophu endala kunye nesixeko esidala saseMunich.
Uphuhliso lwase-East Munich lwaqala ngasekupheleni kweminyaka yamashumi alithoba kwindawo eyayisakuba yinkomponi yomzi-mveliso weetapile waseJamani (Pfanni) ome nje emva kweMunich Ostbahnhof. U-Pfanni wayevelisa iitshiphusi zetapile zaseJamani, ipuree yeetapile, njalo njalo, kunye nentaphane yamadombolo eetapile, ezithumela kumazwe angaphandle kulo lonke elaseYurophu. Isityalo savalwa ngo-1996 kwaye sahamba ngaphandle kweMunich. Ummandla wonke waguqulwa waba yiKunstpark Ost (Art Parc East), kwaye indawo ejikelezileyo yefektri ejikelezayo yaba yeyona ndawo iphambili yepati ebusuku.
Ngokuguqulwa komhlaba kunye nophuhliso olukhulu, iMunich Eastside (ebizwa ngokuba yi-Werksviertel) yindawo emele ibe kuyo ngoku (ukubona) kunye nokukhetha okulungileyo kokutya kunye craft beer aficionados, kunye nee-pubs, iikhefi kunye noluhlu olumangalisayo lweendawo zokutyela kunye neehotele ezintsha.
Enye yezona zinto zinomtsalane livili likaFerris, elithatha imizuzu engama-35 ukukhwela kwaye linamagumbi angama-27 atofotofo. Ngomhla olungileyo, unokubona iiAlps okanye ukonwabele ukutshona kwelanga okumnandi, kunye nombono omkhulu weMunch wolulela ngaphantsi (iimitha ezingama-80) ngelixa ujonge oololiwe abanomgca othe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya saseMunich (imizuzu engama-35).
Iholo yeDolophu yaseMunich-Ifoto © Elisabeth Lang
Nangona kunjalo, ukuba ujonge nayiphi na ibhodi yomqondiso e-Ostbahnhof, eMunich East Train Station, kunye nezalathiso eziya kwivili likaFerris, ujongela ilize. Akukho nanye! Kuhlala kuyimfihlakalo ukuba kutheni isixeko saseMunich sikhetha ukugcina enye yezona ndawo zinomtsalane eMunich njengeyona mfihlo yesixeko.
Kodwa kulapha apho iMunich yamva nje kunye nesibhakabhaka esitsha esongezwayo ngokuvulwa kweyona hotele inde yaseMunich kwinyanga nje edlulileyo, eyakhiwe kwisisele sangaphambili seetapile. Yeyona hotele yaseMunich yokuqala yaseAussie kunye neyona nto ibonwa ngamehlo.
Entsha kraca Ihotele yaseAdina eMunich ibekwe kumgangatho we-9 ukuya kwe-25 kwaye inika umbono omangalisayo phezu kweMunich. Endleleni eya kwindawo yolwamkelo, ilifti ibonelela ngembono yendlu ye-Opera yaseSydney. Ungakuva ukubanjwa kweOstreliya. Umbono ngumlingo, kwaye kuyanika umdla ukubukela oololiwe abancinci ababomvu bethi gqolo beshiya iSikhululo sase-Ostbahnhof nokubona iFrauenkirche, iinqaba ze-BMW, ​​kunye nenqaba kamabonakude ngasemva.
Iigusha eluphahleni – Ifoto © Elisabeth Lang
Ukusuka kwindawo yokutyela, iindwendwe ziyakwazi ukujonga ezantsi kubumelwane obune-eclectic obusecaleni kwaye bajonge kwisakhiwo esitsha sakhiwe ngezantsi (amabali asi-7) apho umntu anokubona i-ALM yedolophu efanelekileyo (ulawulo lomhlaba wezolimo) phezu kophahla. Alikho idama lokuqubha lihle, kodwa iigusha zokwenyani zisitya ngokonwaba engceni eluhlaza eluphahleni lwendlu, logama iinkukhu ezixakekileyo zibaleka zijikeleza kwaye zinokubuyela ngokukhuselekileyo ehokweni yazo yeenkukhu.
Ngokwenene le yindawo eyonwabisayo ye-eclectic efanele ukuphononongwa.